Imba yekugara, Pfungwa Pamba, Zvemukati, Cikoni
Nemagariro aya epamuri yekugara anoratidza kuiswa kweterevhizheni pamberi pekicheni, tichazotarisa zvakare munzira inonakidza yekugoverwa kwenzvimbo mumba kana tichigadzira dhizaini yemukati. Sezvataona kumberi, nzvimbo yakatarisa yechidzitiro inogona kuva nenzvimbo dzakasiyana zvichienderana nezvinotarisirwa mumba, iko kunobva mwenje wechisikigo, iko kuratidzika kungaita chipinganidzo, ukuru hwekamuri kana huwandu hwezvimwe zvinhu. Kana ichinge yaonekwa chete kubva kunogara nzvimbo, kicheni inoramba iri nzvimbo iri yega yezviitiko zvehupiki iyo iyo isina unidirectional media wave isingabatwe. Muzhinji, izvi zvinoshandawo patafura yekudyira kana imwe nzvimbo yekudyira, uko kusavapo kweTV kunoita hurukuro pakati pevanhu sosi huru yeruzivo uye yevaraidzo. Kune rimwe divi, gadziriro yakadai mumagadzirirwo mazhinji zvakare yakanakira vanaamai vanogona kuita basa ravo rekicheni vasingarasikirwe nekuona kwevana vanoona firimu kana kutamba pachiridzwa.
dhizaini yekutandarira, mazano eturakiti rezuva nezuva, mazano emukati, mazano emadziro ako eTV, mazano e tv, zvemukati dhizaini, kuiswa kweterevhizheni, tv, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Isu tinokupa iwe dzimwe pfungwa dzehunyanzvi hwemukati negirazi yakapendwa kubva kuArt Studio Satto. Zvinoshamisa ...
Patchwork inzira iyo mauri zvimedu zvemucheka wakasungwa pamwechete nguva zhinji kana ...
Iyi yekumukati dhizaini inoitwa mumavara akareruka uye nemidziyo, iine mbiri pastel accents b ...
Iyi dhizaini inosanganisa yazvino uye yechinyakare dhizaini, semuenzaniso mukuru weiyi mazuva ese ...
Kugara Kamuri mazano - White Sofa Sofas
Iyo yakasimudzwa fenicha yakakosha pakugadzirwa kwenzvimbo yekugara uye saka mazano azvino eimba yekutandarira ...
Masaiti makuru ekicheni anoratidzwa pano anongedzera kumuenzaniso wefanicha unozivikanwa kubva kuchigaro ...
Yepakati Yakagadzirwa - Kwekugara Kamuri mazano ane Oval Sofa
Nemazano aya easiti yekugara sofa, isu tichaunza akati wandei emukati dhizaini dhizaini ...